Kupanduka kwaKora, Dhatani, naAbhiramu (1-19)
Kutongwa kwevapanduki (20-50)
16 Kora+ mwanakomana waIzihari,+ mwanakomana waKohati,+ mwanakomana waRevhi,+ akabva asimuka pamwe chete naDhatani naAbhiramu vanakomana vaEriyabhi,+ naOni mwanakomana waPereti, vedzinza raRubheni.+ 2 Vakapandukira Mozisi, ivo nevarume 250 vaIsraeri, machinda eungano, vakanga vakasarudzwa paungano, varume vakanga vakakurumbira. 3 Saka vakaunganira+ Mozisi naAroni, vakati kwavari: “Manyanya imi! Ungano yese itsvene,+ yese zvayo, uye Jehovha ari pakati payo.+ Saka sei muchida kuzvikwidziridza paungano yaJehovha?” 4 Mozisi achingozvinzwa, akabva apfugama, akadzikisa musoro wake. 5 Akabva ati kuna Kora nekuvanhu vese vaimutsigira: “Mangwana mangwanani, Jehovha achaita kuti zvizivikanwe kuti wake ndeupi+ uye kuti mutsvene ndeupi uye kuti ndiani anofanira kuswedera pedyo naye,+ uye munhu waachasarudza+ ndiye achaswedera pedyo naye. 6 Itai izvi: Torai midziyo yekuisira moto,+ iwe Kora nevatsigiri vako vese,+ 7 muise moto mukati mayo, moisamo rusenzi pamberi paJehovha mangwana, uye munhu achasarudzwa naJehovha,+ ndiye mutsvene. Imi vanakomana vaRevhi+ mazonyanya!” 8 Mozisi akabva ati kuna Kora: “Zvino chinzwai imi vanakomana vaRevhi. 9 Ko zvamakaitirwa naMwari waIsraeri zvishoma here pakuti akakutsaurai paungano yaIsraeri+ akakubvumirai kuswedera pedyo naye muchiita basa repatebhenekeri yaJehovha uye muchimira pamberi peungano kuti muishumire,+ 10 akakuswededzai pedyo naye pamwe nehama dzenyu dzese, vanakomana vaRevhi? Zvino mava kuda upristi zvakare?+ 11 Nemhaka yeizvi, iwe nevatsigiri vako vese vari kuungana, muri kupandukira Jehovha. Ko Aroni ndiye ani wamava kugunun’unira?”+ 12 Mozisi akazoti Dhatani naAbhiramu+ vanakomana vaEriyabhi vashevedzwe, asi ivo vakati: “Hatisi kuuya ikoko! 13 Unoti kutibudisa kwawakaita munyika inoyerera uchi nemukaka kuti utiurayire murenje chinhu chidiki here?+ Wava kutodawo kuzviita ishe patiri nhai? 14 Iye zvino hauna kutiendesa kunyika inoyerera uchi nemukaka+ kana kutipa nhaka yeminda yekudyara mbeu neminda yemizambiringa. Unoda kutushura maziso evarume ivavo here? Hatisi kuuya ikoko!” 15 Saka Mozisi akatsamwa kwazvo, ndokuti kuna Jehovha: “Musatombotarisa mupiro wavo wezviyo.* Handina kana kumbovatorera kana dhongi rimwe chete, uyewo hapana kana mumwe chete wavo wandakaitira zvakaipa.”+ 16 Mozisi akabva ati kuna Kora: “Iwe nevatsigiri vako vese, uyai pamberi paJehovha mangwana, uuye navo pamwe chete naAroni. 17 Mumwe nemumwe anofanira kutora mudziyo wake wekuisira moto, oisa rusenzi pauri, uye mumwe nemumwe achauya nemudziyo wake wekuisira moto pamberi paJehovha, midziyo 250 yekuisira moto. Iwe naAroni muuyewo, mumwe nemumwe aine mudziyo wake wekuisira moto.” 18 Saka mumwe nemumwe wavo akatora mudziyo wake wekuisira moto, uye vakaisa moto, vakaisa rusenzi pairi, ndokumira pasuo retende rekusanganira pamwe chete naMozisi naAroni. 19 Kora paakanga aunganidza vatsigiri vake+ kuti vapikisane navo pasuo retende rekusanganira, kubwinya kwaJehovha kwakaonekwa neungano yese.+ 20 Jehovha akabva audza Mozisi naAroni kuti: 21 “Ibvai pakati peboka iri, kuti ndibva ndangovaparadza izvozvi.”+ 22 Vakabva vapfugama, vakaisa misoro yavo pasi, vakati: “Nhai Mwari, Mwari anopa vanhu vese upenyu,*+ kutadza kwemunhu mumwe chete kungabva kwaita kuti mutsamwire ungano yese here?”+ 23 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 24 “Taura neungano, uvaudze kuti, ‘Ibvai pamatende aKora, Dhatani, naAbhiramu!’”+ 25 Mozisi akabva asimuka, akaenda kwaiva naDhatani naAbhiramu, uye vakuru+ vaIsraeri vakaenda naye. 26 Akaudza ungano yacho kuti: “Ndapota hangu, ibvai pamatende evanhu ava vakaipa, uye musabata kana chinhu chavo, kuti murege kuparadzwa muzvivi zvavo zvese.” 27 Vakabva vangobva pamatende aKora, Dhatani, naAbhiramu, kumativi ese, uye Dhatani naAbhiramu vakabuda, vakamira pamasuo ematende avo, pamwe chete nemadzimai avo, nevanakomana vavo netuvana twavo tudiki. 28 Mozisi akabva ati: “Muchaziva neizvi kuti Jehovha akandituma kuti ndiite zvinhu zvese izvi, kuti hazvisi zvemumusoro mangu: 29 Kana vanhu ava vakafa semafiro anongoita vanhu vese uye vakarangwa semarangirwo anongoitwa vanhu vese, Jehovha anenge asina kundituma.+ 30 Asi kana Jehovha akavaitira chimwe chinhu chisati chamboitika uye pasi pakavhurika* povamedza pamwe nezvinhu zvavo zvese vopinda muGuva* vari vapenyu, muchabva maziva kuti varume ava havana kuremekedza Jehovha.” 31 Achingopedza kutaura mashoko aya ese, pavakanga vakamira pakabva patsemuka.+ 32 Uye nyika yakavhurika,* ikavamedza pamwe chete nemhuri dzavo nevanhu vese vakanga vari vaKora+ nezvinhu zvavo zvese. 33 Saka ivo nevanhu vavo vese, vakapinda muGuva* vari vapenyu, ivhu rikavafushira, zvekuti vakaparara pakati peungano.+ 34 VaIsraeri vese vakanga vari pedyo navo vakatiza pavakanzwa mhere yavairidza, nekuti vakati: “Tinotya kuti nyika ingatimedzawo!” 35 Moto wakabva wabva kuna Jehovha+ ukaparadza varume 250 vaipisa rusenzi.+ 36 Jehovha akabva ati kuna Mozisi: 37 “Udza Eriyezari mwanakomana wemupristi Aroni kuti atore midziyo yekuisira moto+ iri mumoto nekuti mitsvene. Umuudzewo kuti aparadzire moto wacho kure. 38 Midziyo yekuisira moto yevarume vakatadza vakazviurayisa* inofanira kugadziriswa marata matetetete, ekunamira paatari,+ nekuti vakauya nayo pamberi paJehovha, uye yakava mitsvene. Inofanira kuva chiratidzo kuvaIsraeri.”+ 39 Saka mupristi Eriyezari akatora midziyo yemhangura yekuisira moto yakanga yauya nevaya vakanga vapiswa, uye akaipfura kuti inamirirwe paatari, 40 sezvaakanga audzwa naJehovha achishandisa Mozisi. Chaiva chiyeuchidzo kuvaIsraeri kuti pasava nemunhu asina mvumo,* asiri mumwe wevana vaAroni, anoswedera pedyo kuti apisire rusenzi pamberi paJehovha+ uye kuti pasava nemunhu anozoita saKora nevatsigiri vake.+ 41 Zuva rakatevera chairo, ungano yese yevaIsraeri yakatanga kugunun’unira Mozisi naAroni,+ ichiti: “Varume imi makauraya vanhu vaJehovha.” 42 Ungano payakanga yaunganira Mozisi naAroni, vakatarisa kutende rekusanganira, gore rikabva raifukidza, uye kubwinya kwaJehovha kwakatanga kuoneka.+ 43 Mozisi naAroni vakaenda pamberi petende rekusanganira,+ 44 uye Jehovha akati kuna Mozisi: 45 “Imi varume, ibvai pakati peungano iyi, kuti ndibva ndangovaparadza izvozvi.”+ Ivo vakabva vapfugama, vakaisa misoro yavo pasi.+ 46 Mozisi akabva ati kuna Aroni: “Tora mudziyo wekuisira moto, uuise moto unobva paatari,+ woisa rusenzi pauri, uye kurumidza kuenda kuungano wonoiyananisira,+ nekuti Jehovha ava kuratidza hasha dzake. Denda ratanga!” 47 Aroni akabva angoutora, sezvakanga zvataurwa naMozisi, akamhanya achipinda pakati peungano, uye denda rakanga ratanga pakati pevanhu. Saka akaisa rusenzi pamudziyo wekuisira moto, akatanga kuyananisira vanhu. 48 Akaramba akamira pakati pevakanga vafa nevapenyu, uye denda racho rakazoguma. 49 Vaya vakaurayiwa nedenda racho vakasvika 14 700, tisingaverengi vaya vakaurayiswa naKora. 50 Aroni paakazodzokera kwaiva naMozisi kusuo retende rekusanganira, denda racho rakanga raguma.
^ ChiHeb., “wemweya yenyama yese.”
^ ChiHeb., “pakashama muromo wapo.”
^ ChiHeb., “yakashama muromo wayo.”
^ Kana kuti “vakatadzira mweya yavo.”
^ ChiHeb., “hapana mutorwa.”